Madaxweynaha Puntland oo ku wajahan magaalada Garoowe & arrimaha horyaal.
Puntlandtimes (Garoowe)-Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo muddooyinkii ugu dambeeyey safaro ugu maqnaa dalalka Kenya, Jabuuti iyo Imaaraadka Carabta ayaa lagu wadaa inuu maanta dib ugu laabto magaala madaxda Puntland ee Garoowe.
Magaalada Garoowe ayaa waxaa laga dareemayaa diyaar garaw loogu jiro soo dhoweynta madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni oo markii ugu horraysay lafilayo inuu ka hadlo arrimo quseeya doorashooyinka Soomaaliya iyo xogta la xiriirta hankiisa musharaxnimo.
Garoonka diyaaradaha General Maxamed Abshir ee magaalada Garoowe ayaa lafilayaa inay madaxweynaha ku soo dhoweeyaan madaxweyne ku-xigeenkiisa, golayaasha kala duwan ee dowladda iyo qaar kamid ah bulshada kunool magaalada Garoowe ee caasimadda dowladda Puntland.
Socdaalka madaxweyne Deni ayaa ku soo beegmaya xilli Garoowe uu kajiro khilaaf ka dhashay waxka bedelka xeer hoosaadkii golaha wakiilada loona diyaar garoobayo doorashada xildhibaanada labada aqal ee barlamaanka jamhuuriyadda federalka ah ee Soomaaliya.